1. Inona no tsy maintsy dinihina rehefa mividy fitaovana plugging plastika malemy paika amin'ny Internet? Ahoana ny fomba hanaovana safidy tsara? Ny fividianana an-tserasera fitaovana fametahana voajanahary azo ovaina dia midika fa novidina tamin'ny tranokala indostrialy ilay vokatra. Noho izany, misy ny sasany mifandraika ...
Wei Cheng modely fisorohana afo hanao firewall azo antoka, afaka manao tsara kokoa isika
Amin'ny maha karazana fitaovana plugging vaovao azy ireo, ny maodelin'ny afo-retardant dia nibodo haingana ny haavon'ny fitaovana plugging ary nanjary ankafiziny hafa teo amin'ny tsenan'ny fananganana. Ny fahaterahan'ilay modely miaro amin'ny afo dia nahatonga ny fitaovana plugging nentim-paharazana very loko, ...
Tao anatin'izay taona faramparany izay, ny fanjakana dia nandinika bebe kokoa ny fisorohana ny afo amin'ny tetik'asa fananganana trano, ary fitaovana maro fisorohana afo no napetraka tamin'ny fananganana injeniera. Db-a3-cd01 kitapo maharitra afo dia karazana fanohanana afo-vaovao ...
Ahoana ny fikajiana ny habetsaky ny firakotra amin'ny firakotra ahi-bary
Ny fonosana maharitra amin'ny afo dia matetika misy karazana afo-plastika sy plastika. Izy io dia afaka mamorona sarisary insulation foam foam insulate rehefa may. Izy io dia afaka manakana sy manakana ny fihanaky ny fiparitahan'ny lelafo ary miaro ireo tariby ...